Ny risika amin'ny aterineto no loza mananontanona indrindra amin'ny fikarohana sosialy; Nihanalavitra be izany; ary io no tena mety haha-mahatakatra azy.
Ny fanamby ara-ethika faharoa momba ny fikarohana dizitaly dia ny loza mitatao ara-pahalalana , ny mety hisian'ny fanararaotana ny fampahalalam-baovao (National Research Council 2014) . Mety ho ara-toekarena ny fahasarotan'ny fampahalalam-baovao amin'ny alàlan'ny famoahana ny mombamomba ny olona (ohatra, ny asa an-tery), sosialy (ohatra: manjavozavo), psycholojika (ohatra ny famoretana), na mpanao heloka bevava (ohatra, fisamborana noho ny fitondrantena tsy ara-dalàna). Mampalahelo fa mihamitombo ny taham-pahalalàm-baovao amin'ny vanim-potoana dizitaly-dia misy fanazavana bebe kokoa momba ny fitondran-tenantsika. Ary ny loza ara-pahasalamana dia hita fa sarotra loatra ny mahatakatra sy hitantana raha ampitahaina amin'ny loza mety hiteraka olana eo amin'ny fikarohana ara-tsosialy anona taona, toy ny loza ara-batana.
Ohatra iray tena tsara amin'ny tsy fahombiazan'ny "fanamarinana" avy amin'ny faran'ny taona 1990 tany Massachusetts (Sweeney 2002) . Ny Vaomiera momba ny fiantohana ny vondrona (GIC) dia masoivohom-panjakana tomponandraikitra amin'ny fividianana fiantohana ara-pahasalamana ho an'ny mpiasa rehetra. Tamin'ny alalan'ity asa ity dia nangataka firaketana amin'ny antsipirihan'ny fahasalamana momba ny mpiasa an'arivony ny GIC. Tamin'ny fiezahana hitadiavana fikarohana, nanapa-kevitra ny handefa ireo firaketana ireo ireo mpikaroka ireo GIC. Na izany aza, tsy nizara ny angon-draketrany izy ireo; Aleo izy ireo no "nanamarika" ireo angon-drakitra ireo amin'ny alàlan'ny fanalana ny fampahalalana toy ny anarana sy adiresy. Na izany aza dia nandao fampahalalana hafa izy ireo izay heveriny fa mety ilaina ho an'ny mpikaroka toy ny fampahalalam-baovao (code postal, daty nahaterahana, foko, ary ny firaisana ara-nofo) sy ny fampahalalam-baovao ara-pahasalamana (fitsidihana angon-drakitra, fandidiana, fomba fanao) (sary 6.4) (Ohm 2010) . Indrisy anefa fa tsy ampy ny "fanamarinana" mba hiarovana ny angon-drakitra.
Sary 6.4: "Anonymization" dia dingana amin'ny fanesorana ny fampahalalana hita mazava. Ohatra, ny famoahana ny rakitra ara-pahasalaman'ny mpiasam-panjakana dia nanaisotra ny anarana sy ny adiresy ao amin'ny antontan-taratasy ny Vaomieran'ny Vaomiera Maosianina (GIC). Mampiasa ny teny fanamarihana manodidina ilay teny hoe "fanamarinana" aho satria ny fizotry ny fomba dia manome ny tsy fisian'ny anarana fa tsy ny tena anarana.
Ho fanehoana ny tsy fahampian'ny GIC "fanamarinana", Latanya Sweeney-avy eo mpianatra mpianatra ao amin'ny MIT- dia nandoa $ 20 mba hahazoana ny antontan-taratasim-pifidianana avy any an-tanànan'i Cambridge, tanàna niavian'ny governoran'i Massachusetts William Weld. Ireo firaketana an-tsoratra ireo dia ahitana fampahalalana toy ny anarana, adiresy, code postal, daty nahaterahana, ary ny lahy sy vavy. Ny filazana fa ny rakitra momba ny fitsaboana sy ny tahirim-pifidianana dia nizara saha-postal code, daty nahaterahana, ary ny firaisana ara-nofo-dia midika fa i Sweeney dia afaka mampifandray azy ireo. Sweeney dia nahafantatra fa tamin'ny 31 jolay 1945 no nahaterahan'i Weld, ary enina ny enim-bolana tao Cambridge tamin'io daty io. Ankoatra izany, tamin'ireo olona enina ireo dia lehilahy telo ihany. Ary, tamin'ireo lehilahy telo ireo, dia iray ihany no nizara ny zip-pandefasan'ny Weld. Araka izany, ny tahirim-pifidianana dia naneho fa ny olona rehetra ao amin'ny tambajotram-pitsaboana amin'ny fampiarahana ny daty nahaterahana, ny lahy sy vavy ary ny code postal dia William Weld. Amin'ny ankapobeny, ireo fampahalalam-baovao telo ireo dia nanome soso-kevitra manokana momba azy amin'ny data. Nampiasa an'io zava-misy io i Sweeney, afaka nahita ny rakitra ara-pahasalamana tao Weld, ary, nampahafantatra azy ny zava-bitany, dia nandefa kopia ny bokiny izy (Ohm 2010) .
Sary 6.5: Famerenana ny angon-drakitra "tsy fantatra". Latanya Sweeney dia nampitambatra ny firaketana an-tsoratra momba ny fahasalamana "tsy fantatra anarana" miaraka amin'ny firaketana fifidianana mba hitadiavana ny rakitra ara-pahasalaman'ny Governora William Weld Adapted avy amin'ny Sweeney (2002) , sary 1.
Ny asan'i Sweeney dia maneho ny rafitra fototra amin'ny fanafihana an-tsokosoko indray - mba handraisana fepetra avy amin'ny fiarovana ny solosaina. Anatin'ireny fanafihana ireny, ny antonta-kevitra anankiroa, izay tsy mampiseho ny fampahalalam-baovao mafonja, dia mifandray, ary amin'ny alalan'ity fifandraisana ity dia misy vaovao misongadina.
Ho valin'ny asan'i Sweeney, sy ny asa hafa mifandraika amin'izany, ny mpikaroka ankehitriny dia manala fanazavana misimisy kokoa - ireo antsoina hoe "fampahalalana manokana" (PII) (Narayanan and Shmatikov 2010) -fahatrehana ny dingana "fanamarinana." Ankoatra izany, maro ny mpikaroka Fantatra ankehitriny fa ny angon-drakitra sasantsasany - toy ny firaketana ara-pahasalamana, firaketana ara-bola, valim-panontaniana momba ny fitondran-tena tsy ara-dalàna - dia mety ho mora kokoa amin'ny famotsorana azy na dia aorian'ny "tsy famonoana." Na izany aza, hanova ny fomba fisainany. Amin'ny dingana voalohany dia tsara ny mihevitra fa ny angon-drakitra rehetra dia mety ho azo fantarina ary ny angon-drakitra rehetra dia azo tsapain -tanana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, fa tsy mieritreritra fa mety hampiharina amin'ny ampahany kely amin'ny tetikasa ny risika amin'ny fampahalalam-baovao, dia tokony hihevitra isika fa azo ampiharina amin'ny sehatra rehetra - amin'ny tetikasa rehetra.
Ny endri-javatra roa amin'ity fanavaozana ity dia asehon'ny loka Netflix. Araka ny voatanisa ao amin'ny toko faha-5 dia navoakan'i Netflix mpilalao sarimihetsika maherin'ny 100 tapitrisa izay omena ny mpikambana 500 000 eo ho eo, ary nanana antso an-kalalahana izay nanoloran'ny olona manerana izao tontolo izao algorithm izay afaka manatsara ny fahaiza-manaon'ny Netflix mba hanolotra filma. Talohan'ny namoahana ny angon-drakitra, i Netflix dia nanaisotra ny mombamomba azy manokana, toy ny anarana. Izy ireo koa dia nanao dingana fanampiny ary nampiditra lohahevitra kely teo amin'ny sasantsasany tamin'ireo rakitsoratra (ohatra, manova ny fanatsarana sasany avy amin'ny kintana 4 sy 3). Tsy ela anefa dia hitan'izy ireo fa na dia teo aza ny ezak'izy ireo, dia mbola tsy fantatry ny olona akory ny angon-drakitra.
Herinandro roa monja taorian'ny namoahana ireo angona dia nampiseho i Arvind Narayanan sy Vitaly Shmatikov (2008) fa azo atao ny mianatra momba ny safidy sarimihetsika ataon'ny olona manokana. Ny fikiakiahana amin'ny fanafihana an-tserasera indray dia mitovy amin'ny an'i Sweeney: mampifandray loharanom-baovao anankiroa, iray amin'ny fampahalalam-baovao azo tsapain-tanana ary tsy voamarika mazava ny vaovao ary misy ny mombamomba ny olona. Ny tsirairay amin'ireo loharanom-baovao ireo dia mety ho azo antoka ho an'ny tsirairay, saingy rehefa tafakambana izy ireo, ny angona daty napetraka dia mety hametraka risika amin'ny aterineto. Raha mikasika ny angon-drakitra Netflix, eto ny fomba hitrangan'izany. Alao sary an-tsaina fa misafidy ny hizara ny eritreritro momba ny hetsika sy ny sarimihetsika comedy miaraka amin'ireo mpiara-miasa amiko aho, saingy aleoko tsy te hizara ny hevitro momba ny filma ara-pinoana sy politika. Ny mpiara-miasa dia afaka mampiasa ny vaovao izay nizarako azy ireo mba hahitako ny rakitsoratra ao amin'ny rakitra Netflix; Ny fampahalalana azoko dia mety ho fanondro-tanana manokana toy ny daty nahaterahan'i William Weld, postal code, ary ny firaisana ara-nofo. Avy eo, raha hitany ny fingadahako manokana ao anaty angon-drakitra, dia azon'izy ireo ny mianatra ny mombamomba ny filma rehetra, anisan'izany ny sarimihetsika izay misafidy ny tsy hizara. Ankoatra ity karazana fanafihana tanjona mifantoka amin'ny olona tokana ity dia naneho ihany koa i Narayanan sy Shmatikov fa azo atao ny manafika fanafihana - misy olona maro - amin'ny fampifangaroana ny angona Netflix amin'ny angona manokana sy sarimihetsika mombamomba ny olona sasany hametraka ao amin'ny Internet Movie Database (IMDb). Tsotra fotsiny, ny fampahalalana rehetra izay fonosana manokana ho an'ny olona iray manokana-na dia ny sarimihetsika filma misy azy aza dia azo ampiasaina hamantarana azy ireo.
Na dia mety ho voatanisa amin'ny fanafihana teboka na malalaka aza ny angona Netflix, dia mety mbola tsy dia atahorana loatra izany. Na izany na tsy izany, tsy dia mahatsiaro tena loatra ny filazam-baovao. Na izany aza dia mety amin'ny ankapobeny izany, ho an'ny sasany amin'ireo olona 500.000 ao amin'ny daty, dia mety ho fahamatorana ny filma. Raha ny marina, ho setrin'ny fanodinkodinana indray, dia nisy vehivavy vehivavy lesbe efa tafiditra ao an-dakilasy hanohitra ny Netflix. Toy izao ny fomba nanehoana ilay olana tao amin'ny fitsarana azy (Singel 2009) :
Ny famerenana ny mombamomba ny loka Netflix dia mampiseho fa ny angon-drakitra rehetra dia mety ho azo fantarina ary ny angon-drakitra rehetra dia azo tsapain-tanana. Amin'ity fotoana ity, mety hieritreritra ianao fa tsy misy afa-tsy amin'ny angona izay milaza ny momba ny olona. Tsy mahagaga raha tsy izany no izy. Ho valin'ny fangatahana Fahalalahana momba ny fahalalaham-panazavana, ny Governemanta New York dia namoaka ny rakitsary momba ny fiarandalamby taxi any New York tamin'ny taona 2013, tafiditra ao anatin'izany ny fisavana sy ny fialana amin'ny fotoana, ny toerana ary ny sandan'ny saran-dalana (tsarovy ao amin'ny toko 2 fa Farber (2015) nampiasana angona mitovy amin'izany mba hijerena ireo teoria manan-danja amin'ny toekarena momba ny asa). Ireo angon-drakitra momba ireo fiarakaretsaka dia mety ho sahiran-tsaina satria toa tsy manome vaovao momba ny olona izy ireo, fa i Anthony Tockar kosa nahatsapa fa ity takelaka fandaharam-potoana ity dia nahitana fanazavana be dia be momba ny olona. Ho setriny, dia nijery ireo fitsangantsanganana nanomboka tao amin'ny Club Hustler izy-klioban'ny tarika lehibe iray tao New York-teo anelanelan'ny misasakalina sy 6 maraina ary avy eo nahita ny toerana nialany. Ity fikarohana ity dia nanambara-amin'ny ankapobeny-lisitry ny adiresin'ny olona sasany izay nandinika ny Hustler Club (Tockar 2014) . Sarotra ny maka sary an-tsaina fa ny governemantan'ny tanàna dia nahatsiaro izany rehefa navoaka ny angon-drakitra. Raha ny marina, io fomba io ihany dia azo ampiasaina mba hitadiavana ny adiresin'ny tokantranon'ny olona mitsidika toerana iray ao an-tanàna-toeram-pitsaboana iray, trano fanorenana, na toeram-pivavahana.
Ireo tranga roa amin'ny loka Netflix sy ny takelaka taxi ao New York dia mampiseho fa ny olona mahay tsy mahay manombantombana dia manombantombana tsara ny mety ho toetr'andro ao amin'ny angon-draketrany - ary ireo tranga ireo dia tsy manan-tsahala (Barbaro and Zeller 2006; Zimmer 2010; Narayanan, Huey, and Felten 2016) . Ankoatr'izay, amin'ny tranga toy izany, dia mbola hita anaty aterineto malalaka ny angon-drakitra any anaty aterineto, manondro ny fahasarotan'ny famoahana ny famoahana angona. Amin'ny ankapobeny, ireo ohatra ireo-ary koa fikarohana amin'ny siansa momba ny fiainana manokana-dia mitarika amin'ny famaranana lehibe. Ny mpikaroka dia tokony hiaiky fa ny angon-drakitra rehetra dia mety azo fantarina ary ny angon-drakitra rehetra dia azo tsapain -tanana.
Indrisy anefa fa tsy misy vahaolana tsotra ho an'ny zava-misy fa ny angon-drakitra rehetra dia mety ho azo fantarina ary ny angon-drakitra rehetra dia azo tsapain-tanana. Na izany aza, ny fomba iray hampihenana ny loza mety hitranga mandritra ny fotoana iasanao amin'ny data dia ny mamorona sy manaraka ny drafitra fiarovana . Ity tetikasa ity dia hampihena ny fahafaha mety handroaka ny angon-drakitrao ary hampihena ny voka-dratsy raha mitranga izany. Ny singa fiarovana ny drafitry ny fiarovana momba ny fiarovana, toy ny endritsoratra amin'ny fampiasana, dia hiova amin'ny fotoana, fa ny UK Data Services dia mamorona amin'ny fomba mahomby ny singa amin'ny drafitra fiarovana anaty sokajy ho sokajy dimy izay antsoin'izy ireo ny safo dimy : tetik'asa azo antoka, olona azo antoka , safidy azo antoka, tahirin-kevitra azo antoka, ary vokatra azo antoka (tabilao 6.2) (Desai, Ritchie, and Welpton 2016) . Tsy misy amin'ireo sambo dimy manokana manome fiarovana tanteraka. Saingy miaraka izy ireo dia mamorona anton-javatra matanjaka izay mety hampihena ny risika amin'ny aterineto.
Tabilao 6.2: Ny "Safidy dimy" dia fitsipika momba ny famolavolana sy fanatanterahana planina fiarovana iray (Desai, Ritchie, and Welpton 2016)
Tetikasa azo antoka Mametra ny tetikasa miaraka amin'ny data ho an'ireo izay mianatra
Olona azo antoka Ny Access dia voafetra ho an'ireo olona azo atokisana amin'ny angon-drakitra (ohatra, ireo olona izay nanao fanatanjahan-tena etika)
Daty azo antoka Ny data dia voafaritra sy voafintina araka izay azo atao
Safe settings Ny tahiry dia voatahiry ao amin'ny solosaina miaraka amin'ny fikarakarana ara-batana (ohatra, efamira mihidy) sy rindrambaiko (oh: fiarovana amin'ny tenimiafina, famehezana)
Fiarovana azo antoka Ny famoahana ny fikarohana dia natao hialana amin'ny fisorohana ny tsy fahampian'ny privacy
Ankoatra ny fiarovana ny angon-drakitrao raha ampiasanao azy ireo, dingana iray amin'ny fikaroham-pikarohana izay tena mampidi-doza ny fampahalalam-baovao dia ny fizarana ny angona amin'ny mpikaroka hafa. Ny fizarana ny data eo amin'ireo mpahay siansa dia tena zava-dehibe amin'ny ezaka ara-tsiantifika, ary manamora ny fampivoarana ny fahalalana izany. Toy izao no nanazavan'ny House United Commons ny maha-zava-dehibe ny fizarana (Molloy 2011) :
"Ny fahafahana miditra amin'ny data dia fototra ifantohan'ireo mpikaroka mba hamerina, hanamarina ary hanorina vokatra izay voalaza ao amin'ny boky. Tsy maintsy misy ny fisainana, raha tsy misy antony matotra, dia tokony havoitra tanteraka ny angona ary azo ampiharina ampahibemaso. "
Na izany aza, amin'ny alalan'ny fizarana ny angona misy anao amin'ny mpikaroka iray hafa dia mety hampitombo ny loza mety hitranga amin'ny mpandray anjara ianao. Araka izany dia mety ho toa miteraka fifandirana lehibe eo amin'ny fizarana angon-drakitra ny fizarana angon-drakitra ny adidy hizara data miaraka amin'ny mpahay siansa hafa sy ny adidy amin'ny fampihenana ny loza mety hitranga amin'ny mpandray anjara. Soa ihany, ity olana ity dia tsy henjana tahaka ny nisehoany. Tsara kokoa ny misaintsaina ny fizaràna ny angon-drakitra toy ny fifandimbiasam-pandrefesana, miaraka amin'ny teboka tsirairay avy amin'io fifandimbiasana io izay manome tombony ho an'ny fiarahamonina sy risika ho an'ny mpandray anjara (sary 6.6).
Amin'ny fara-tampony, afaka mizara ny angon-drakitrao amin'ny tsy misy ianao, izay mampihena ny risika ho an'ny mpandray anjara ary manamaivana ny tombony amin'ny fiarahamonina. Amin'ny hafa fara-faharatsiny, afaka mamoaka sy manadino anao ianao , izay "tsy fantatra anarana" sy ny hafatra alefa ho an'ny rehetra. Mifanaraka amin'ny tsy famoahana angona, famotsorana ary adinoana dia manome tombontsoa ambony kokoa ho an'ny fiarahamonina sy risika ambony ho an'ny mpandray anjara. Miaraka amin'ireo tranga roa ireo dia misy hybrides isan-karazany, anisan'izany ny zavatra hiantso ny zaridaina misy rindrina . Amin'ity fomba ity, ny angona dia zaraina amin'ireo olona izay manana fepetra sasantsasany ary manaiky fa voafatotry ny fitsipika sasany (ohatra, miandraikitra ny IRB sy ny drafitra fiarovana). Ny fomba fitazonana zaridaina dia manome tombontsoa betsaka amin'ny famotsorana sy adinoana amin'ny tsy fahampian'ny risika. Mazava ho azy, ny famolavolana toy izany dia mametraka fanontaniana maro-iza no tokony hiditra, ao anatin'ny fepetra, ary mandritra ny fotoana maharitra, iza no tokony handoa ny hikojakojana sy ny polisy ny zaridaina misy rindrina, sns ... kanefa tsy azo antoka loatra izany. Raha ny marina, efa misy saha efa miha-miadana eo amin'ny toerana izay azon'ny mpikaroka atao amin'izao fotoana izao, toy ny tahirin-kevitra momba ny Consortium Inter-University momba ny Fikarohana Politika sy Sosialy any amin'ny Oniversiten'i Michigan.
Figure 6.6: Ireo tetikady famoahana ny data dia mety hianjady amin'ny continuum. Ny toerana tokony hifandraiketanao dia miankina amin'ny antsipiriany manokana momba ny angon-drakitrao, ary ny fanadihadian'ny olon-kafa dia afaka manampy anao hanapa-kevitra ny fandanjalanjana mety amin'ny loza sy ny tombontsoa amin'ny tranga misy anao. Ny endrik'io mari-pamantarana io dia miankina amin'ny tsipiriany momba ny tanjona sy ny tanjona fikarohana (Goroff 2015) .
Noho izany, aiza no tokony hampiasana ny angona avy amin'ny fianaranao tsy misy fizarana, zaridaina mihidy, ary mamela sy manadino? Miankina amin'ny tsipiriany momba ny angon-drakitrao izany: ny mpikaroka dia tokony handanjalanja ny fanajana ny olona, ​​ny fahamendrehana, ny rariny, ary ny fanajana ny lalàna sy ny tombontsoan'ny besinimaro. Raha jerena avy amin'io fomba fijery io, ny fifampizarana data dia tsy mampihetsi-po amin'ny lafiny etika; Izy io dia iray amin'ireo lafiny maro amin'ny fikarohana izay tsy maintsy hitadiavan'ny mpikaroka fitadiavam-bola.
Ny mpitsikera sasany dia manohitra ny fizarana amin'ny angona satria, araka ny hevitro, dia mifantoka amin'ny loza aterany izy ireo-izay tsy isalasalana fa-ary tsy miraharaha ny tombontsoa azony. Noho izany, mba hamporisihana ny fifantohana amin'ny loza sy ny tombontsoa azoko, dia te-hanolotra fampitahana aho. Isan-taona, ny fiara dia tompon'andraikitra amin'ny fahafatesan'olona an'arivony maro, saingy tsy manandrana mandà fiara izahay. Raha ny tena izy dia tsy misy dikany ny fiantsoana ny fandraràna ny fiara satria mahavita zavatra mahatalanjona maro ny fiara. Ny fiarahamonina kosa mametra ny fepetra izay afaka mitondra fiara (ohatra, ny ilana ny taona maromaro ary efa nandalo fitsapana sasany) sy ny fomba ahafahan'izy ireo mitondra fiara (ohatra, eo ambanin'ny fetran'ny hafainganam-pandehan'ny hafainganana). Ny Society dia manana andraikitra amin'ny fampiharana ireo fitsipika ireo (ohatra ny polisy), ary manasazy ireo olona voasambotra. Ity karazana fomba fisainana voalanjalanja ity ihany koa fa ny fampiharana ny fiarahamonina dia ny fampiharana ny fizarana. Izany hoe, raha tokony handresy lahatra amin'ny fiarovan-tena na amin'ny fanerena ny fizarana dia mihevitra aho fa hanao ny fandrosoana indrindra isika amin'ny fifantohana amin'ny fomba ahafahantsika mampihena ny risika sy mampitombo ny tombontsoa avy amin'ny fizarana data.
Eo am-pamaranana dia mitombo ny risika amin'ny fampahalalam-baovao, ary sarotra be ny maminavina sy mandanjalanja. Noho izany, tsara indrindra ny mihevitra fa ny angona rehetra dia azo fantarina sy azo tsapain-tanana. Mba hampihenana ny loza mety hitranga mandritra ny fanaovana fikarohana dia afaka mamorona sy manaraka ny drafitra fiarovana ny mpikaroka. Ankoatra izany, ny risika amin'ny fampahalalam-baovao dia tsy misakana ireo mpikaroka tsy hizara data amin'ny mpahay siansa hafa.